तपाइँको कम्प्युटर वा मोबाइलमा कसरी भिडियो घुमाउने - क्रिएटिभोस अनलाइन | क्रिएटिव अनलाइन
हामीसँग हाम्रो कम्प्युटरमा फाईल छ वा यदि हामीसँग हाम्रो मोबाइलमा छ भने कहिलेकाँही यो गलत स्थितिमा हुन्छ। र यदि हामी भिडियो कसरी घुमाउने भनेर हेर्छौं भने हामी भिन्न र धेरै स्पष्ट विकल्पहरू देख्दैनौं। कोहीले यसलाई मोबाइलसँग कसरी गर्ने भनेर वर्णन गर्दछन्, अरूहरू कम्प्युटरबाट। अरूले केवल आईओएस वा एन्ड्रोइड र कम्प्युटर, विन्डोज वा म्याकमा वैकल्पिक विकल्प दिन्छन्। त्यसो भए समाधानको खोजीमा जान गाह्रो हुन्छ जुन कुनै पनि समयमा आवश्यक परेको छ।
क्रेटिभोस अनलाइनबाट आएको समस्याको कारण हामी यो मुद्दालाई समाधान गर्न चाहन्छौं। विभिन्न प्लेटफार्महरूको वैकल्पिक, ताकि जब तपाईं यस समस्यामा पर्नुहुनेछ, एक नजरमा तपाईं त्यो प्रश्न समाधान गर्नुहुन्छ। यी प्रकारका वस्तुहरूलाई मनपर्नेको रूपमा चिह्नित गर्दै भविष्यमा काममा आउँदछ, यदि तपाईंले कुनै आवेदन वा फारमहरू याद गर्नुभएन भने। भिडियो घुमाउन धेरै सम्भावनाहरू छन्, अफलाईन र अनलाइन पनि। कुन सजिलो छ?
1 तपाईंको कम्प्युटरमा एक भिडियो घुमाउनुहोस्
2 एक अनलाइन भिडियो घुमाउनुहोस्
3 स्मार्टफोनको साथ भिडियो घुमाउनुहोस्
3.1 आईफोन अनुप्रयोग
3.2 एन्ड्रोइड अनुप्रयोग
तपाईंको कम्प्युटरमा एक भिडियो घुमाउनुहोस्
विशेष रूपमा म्याकको लागि प्रोग्राम विन्डोजको लागि उस्तै हुँदैन। न त एक प्रोग्राम जुन दुबै प्लेटफर्महरूमा समान छ। प्रत्येकसँग यसको टच हुन्छ र 'चाल'। हामी ती सबैलाई साना चरणहरूमा देख्नेछौं जुन कार्यक्रमहरू हुन्छन् जसमा लाइनको अभाव बिना राम्रोसँग कार्य गर्दछ, तर त्यो केहि कार्यहरू गर्न अधिक जटिल हुन्छ। ठूलो तौलको भिडियो घुमाउन आवश्यक पर्ने अवस्थामा, यी सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुनेछ, किनकि, यदि हामी प्रयास गर्यौं भने अनलाइन यो लिने समय साँच्चै कष्टकर हुन सक्छ।
म्याकको प्रयोगमा हामी Final Cut Pro X प्रयोग गर्नेछौं: हामी हाम्रो भिडियो छनौट गर्दछौं र यसलाई हाम्रो टाइमलाइनमा आयात गर्दछौं। या त विकल्पहरू मार्फत: फाईल> आयात गर्नुहोस् वा ड्र्याग गरेर समय रेखा सिधा एक पटक हामीसंग हाम्रो भिडियो आयात र पूर्ण आयात- सहित तैयार भएपछि, हामी कार्यक्रमको दायाँ भागमा जान्छौं। त्यहाँ हामी एक 'चलचित्र टेप' आइकन देख्नेछौं जसलाई 'भिडियो निरीक्षक' भनिन्छ।
हामी 'रूपान्तरण' विकल्पमा क्लिक गर्दछौं र त्यसपछि 'रोटेशन' मा जाऔं। अब हामी स्वादमा जान्छौं, पा the्ग्रा माथि वा तल। यद्यपि हामी हाम्रो झुकाव संख्या पनि लेख्न सक्छौं। तर सामान्यतया यो २ settings०º, º ०º, १º०º र ०º जस्तो सामान्य सेटि inहरूमा हुनेछ।
यदि हामी विन्डोज प्रयोग गर्छौं भने हामी सोनी भेगास प्रयोग गर्न सक्छौं: अन्तिम कटमा जस्तै, हामी सोनी भेगास टाइमलाइनमा हाम्रो घुमाइएको भिडियो थप्नेछौं। एकचोटि हामीले यो गरिसकेपछि, हामी फाईल> प्रोपर्टीमा जानु पर्छ। प्रोग्रामको गुणहरूमा हामी आयामहरूलाई विपरित रूपमा राख्नेछौं। त्यो हो, यदि तिनीहरू १०२1024 × in२० मा छन् भने हामी त्यसलाई 720२० × १०२720 मा राख्नेछौं।
यसैले, भिडियो को आयाम उही समान हुनेछ तर सही पालोसँग। त्यस मोडलाई भर्न, हामी समयरेखामा जान्छौं र हाम्रो प्रोजेक्टको तल्लो दायाँ कुनामा, आइकन जुन हामी 'प्यानिंग वा घटना ट्रिमिंग' भन्छौं। हामी दायाँ बटनको साथ क्लिक गर्दछौं र विकल्पहरूमा 'आउटपुट पक्षसँग मेल खान्छ'। हामी म्यानुअल रोटेशनको साथ समायोजन गर्दछौं वा फेरि नम्बरहरूमा डिग्री राखेर। एक पटक यो परियोजनाको रिजोलुसनको साथ राम्रोसँग समायोजित भएपछि हामीसँग भिडियो निर्यात गर्नका लागि तयार हुनेछ।
एक अनलाइन भिडियो घुमाउनुहोस्
अनलाइन कार्यक्रमहरू भारी भिडियो परियोजनाहरूका लागि अविश्वसनीय हुन सक्छन्। यो कम्प्युटर, इन्टरनेट र वेबसाईटको सुविधाहरूमा निर्भर गर्दछ। यो एक विधि हो जुन माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरूको विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिन्छकिनकी, यदि यो एक सानो भिडियो हो भने, यसले त्रुटि छिटो हल गर्दछ र तपाइँ यसलाई पूरा गर्न तपाईलाई ठूलो ज्ञानको आवश्यक पर्दैन।
तर यस अवस्थामा, हामी एक उदाहरण थप्न जाँदैछौं जुन तपाईंलाई कुनै पनि समयमा बचत गर्न सक्दछ। यसलाई भनिन्छ: घुमाउनुहोस् भिडियो। यो वर्णन गर्नको लागि केहि सरल छ र हामी लामो समयसम्म रोक्ने छैनौं। तपाईंले छविमा देख्न सक्नुहुन्छ, कि भिडियो नेटवर्कमा छ वा यदि तपाईंको कम्प्युटरमा छ भने, तपाईं यसलाई लोड गर्नुहोस्। युआरएल मार्फत वा उदाहरणका लागि .mov फाईलको साथ। तपाइँले चाहेको भिडियो ढाँचा छनौट गर्नुहुन्छ, घुमाउने दिशा र कम्प्रेसनको प्रकारलाई सूचित गर्नुहोस्। यस प्रकारको उच्च, कम गुणस्तरको भिडियो हुनेछ र कम भोल्यूमले ओगटेको छ, यसको विपरितमा, यो त्यति नै भारी हुनेछ।
स्मार्टफोनको साथ भिडियो घुमाउनुहोस्
आईओएस र एन्ड्रोइड को लागी धेरै विकल्पहरु छन्। यद्यपि प्रत्येक स्टोरको केही समुदायमा राम्रो समीक्षा हुँदैन। प्रत्येक प्रोजेक्टको उदाहरण राख्दै, हामी एकमा राम्रो आलोचनाको साथ फोकस गर्नेछौं।
जब तपाईं अनुप्रयोग स्टोरमा 'रोटेट भिडियोहरू' राख्नुहुन्छ यो पहिलो खरीदलाई नदेखी क्लिक गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो तब हुन्छ जब हामीसँग हाम्रो भिडियोमा त्यो त्रुटि सच्याउनको लागि 'निराश' हुन्छ। तर हामी पहिलो संग निराश थिए र ... हाम्रो अनुभव निराश हुन सक्छ.
हामी सिफारिस गर्न जाँदै छौं कि आवेदन भिडियो घुमाउनुहोस् तिनीहरूको आलोचना र प्रयोगको लागि हामीले प्रयास गरेका थियौं inShot - भिडियो सम्पादक
Use एक धेरै सजिलो प्रयोग गर्न को लागी र एकदम पूरा अनुप्रयोग। म १००% सिफारिश गर्दछु!। एक ग्राहक राय
यो तार्किक छ, हो माथिको कम्प्युटर अनुप्रयोग नि: शुल्क छैनन्, यी कम हुनेछैन। तपाईं तिनीहरूलाई कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी थाहा पाउन सकिन्छ यदि यो तपाईंलाई विश्वास दिलाउँछ भने। तर यो केवल स्पिनिlyको लागि एक प्रयोग अनुप्रयोग होईन किनकि यसमा उत्कृष्ट भिडियो सम्पादन सुविधाहरू छन्। अनुप्रयोगको स्थायी मूल्य € .33,00€,००० को वरिपरि घुम्छ। तर तपाईं तीन यूरो भन्दा कममा बिभिन्न सुविधाहरू किन्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई केहि सीमित पहुँच गर्न अनुमति दिनेछ। यो तपाईं के को लागी प्रयोग गर्नुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ र तपाईं मात्र तिनीहरूलाई एक अनलक गर्न आवश्यक पर्दछ।
यदि तपाईंको केसमा तपाईंसँग कम्प्युटर छैन वा IOS को पहुँच छैन र तपाईंसँग के छ तपाइँको सबै कामहरू गर्न एक एन्ड्रोइड स्मार्टफोन, सबै भन्दा सिफारिस गरिएको विकल्प हो भिडियो FX घुमाउनुहोस्। गुगल फोटोहरू भन्दा बढि प्रोफेशनल, यद्यपि सानो कामका लागि पनि गुगल फोटोहरूले तपाईंलाई विकल्प दिन सक्दछन्। IOS को साथ, यस अनुप्रयोगले "in-app खरीदहरू" प्रदान गर्दछ।
यो विशेष गरी भिडियो फ्लिप गर्न डिजाइन गरिएको छ, र हामी दुबै घुमाउन अनुमति दिन्छौं हामीसँग ग्यालरीमा भएका भिडियोहरू र हामीले ती गहिरा क्षणमा रेकर्ड गर्न गइरहेका भिडियोहरू। यो धेरै उपयोगी हुन्छ जब हामीले केहि द्रुत रेकर्ड गर्नुपर्दछ र हामी यसलाई केहि सेकेन्डमा कसरी रेकर्ड गर्ने भनेर अनुमान गर्न असम्भव छ। अब, हामी चिन्तित छैनौं, किनकि रोटेट भिडियो एफएक्सले यसलाई पोस्ट-प्रोडक्शनमा फिक्स गर्न सक्षम हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइलमा भिडियो कसरी घुमाउने